Suuqgeynta Mawduucu waa Dheelitirka Cune iyo Abuurka | Martech Zone
Suuqgeynta Mawduucu waa Dheelitirnaan ku timaada Abuurka iyo Abuurka
Marka aan dib u eegis ku sameyno mowduucyada Martech Zone in wax laga qoro, waxaan baareynaa caannadooda iyo sidoo kale waxyaabaha horey loo daabacay. Haddii aan aaminsanahay inaan cusbooneysiin karno mowduuca oo aan ku dari karno faahfaahin dheeri ah oo fure u ah mawduuca - waxaan caadi ahaan qaadnaa hawsha qorista nafteena. Haddii aan aaminsanahay inaan sifiican ugu sharxi karno mowduuca sawirro, jaantusyo, shaashadaha shaashadda ama xitaa fiidiyow - sidoo kale waan qaadan doonnaa.
Tusaale wanaagsan oo tan ah wuxuu ahaa Naqshad wax ku ool ah. Waxaan halkaa ka aqrinay tan maqaalo ah - ma jirin wax yaraansho ah! Si kastaba ha noqotee, markii aan ogaannay inaan soo saari karno fiidiyoow si wanaagsan u sharaxay, maqaal tilmaamaya faa'iidooyinkiisa, iyo infographic oo aan la wadaagi karno in qof kale abuuray ... waan ognahay inaan leenahay guuleyste.
Riixisteenu ma ahan kaliya in wax la qoro, ee waa in lala wadaago waxyaabaha ugu fiican ee aan horumarin karno. Iyo hadaad raacdo Martech Zone on Twitter, Facebook, ama meel kasta oo kale, waxaad arki doontaa inaan wadaagno hal tan oo ka kooban boggaga si aad ah noogu tartamaya dhagaystayaasheena. Sababta Sababtoo ah haddii aynaan qaban karin shaqo ka fiican oo sharraxaysa, maxaa diidaya inaan qiime ku darno dhagaystayaasheena adoo la wadaagaya waxyaabaha cajiibka ah ee kuwa kale?
Haddii aadan heli karin giraangir ka fiican, dib ha u cusbooneysiin… la wadaag midka ugu fiican dhagaystayaashaada! Haddii aad ikhtiraaci karto giraangiraha kafiican - u dhaqaaq! Isu dheellitirnaanta waxyaabaha la wadaagay iyo kuwa la wadaago ee ka kooban waxyaabaha aad abuurtay ayaa ka dhalan doona natiijooyin aad uga wanaagsan kan aad ka kooban tahay oo keliya. Tani infographic laga bilaabo Rebuild Nation wuxuu sharxayaa sababta.
Tags: abuur abuurkamaadooyinka la isku qurxiyowadaagidda qaybta
7 Sababood oo loo hirgaliyo Raadinta Wicitaanka iyo Falanqaynta